The Best ntụrụndụ Parks Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > The Best ntụrụndụ Parks Na Europe
Ọ bụrụ na ị bụghị n'aka na nke nke ntụrụndụ ogige ntụrụndụ na Europe bụ ndị kasị mma, ahụ anya ọzọ. Isiokwu a bụ ndepụta nke ụfọdụ ndị kasị mma ntụrụndụ ogige ntụrụndụ ị nwere ike ịga na Europe ugbu a! Anyị ga-enye gị nkọwa zuru ezu banyere onye ọ bụla na otú i nwere ike inwe na ha n'ụgbọ okporo ígwè. Ya mere, ka na-amalite na ndepụta!
The Kachasinu ogige ntụrụndụ na Europe - Disneyland Paris
Ọ bụrụ na ị gara, ị na-na na obi abụọ adịghị ya nụrụ banyere Disneyland na Paris. The park gụnyere ihe nile na onye nwere ike ịhụ na mbụ Disneyland na United States. Plus, ọ na-agụnye abụọ isiokwu ogige ntụrụndụ na a ngụkọta nke asaa hotels na-na saịtị! Ị ga-akacha mkpa ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ileta ihe niile. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịga na Walt Disney Studios na nke ahụ bụ nri na-esote ogige.
Mgbe ọ na-abịa na-eru park, ọ dịtụ mfe na-abata n'ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè. Otu n'ime ndị kasị Central ụgbọ okporo ígwè n'ógbè nlekọta ọrụ na France bụ nri na-esote Disneyland. The center na ajụjụ bụ Marne-la-Vallee / Chessy ụgbọ okporo ígwè, na i nwere ike iru ya mfe si n'ebe ọ bụla na France ma ọ bụ ngafe. Ihe bụ ihe ọzọ, Disneyland na-emi odude adịghị kwa n'ebe dị anya site Paris.
Lyon na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Lille na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
Kasị Popular ogige ntụrụndụ na Germany - Europapark
Europapark bụ kasị na kasị ewu ewu na park nile nke Europe, nri mgbe Disneyland. Otú ọ dị, nke na-adịghị ihe mere anyị họọrọ ọ. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ntụrụndụ ogige ntụrụndụ na Europe na echiche anyị n'ihi na nke ala-coasters. Ga-esi nọkwasị ọtụtụ n'ime ha na ọtụtụ ndị pụrụ iche n'ezie. Ị ga-elele Arthur – Kacha ọhụrụ ala-coaster na nke ahụ bụ a Nchikota ihe ime ụlọ / n'èzí otu na a gbara ọchịchịrị na-agba ịnyịnya nakwa!
Nwere ike ịchọta nke a ogige ntụrụndụ dị ịtụnanya na nchara, a obodo nso Freiburg na Strasbourg. Nke ahụ pụtara na i nwere ike iru Europapark pụtara mfe site ụgbọ okporo, ọ bụla na obodo. The ọdụ ụgbọ okporo ígwè bụ ụfọdụ 4km pụọ otú i nwere ike mgbe ahụ na-eje ije ruo n'ọnụ ụzọ, ma ọ bụ otu n'ime ndị ụgbọ ala na-aga ka ogige.
Strasbourg ka Ringsheim Ụgbọ oloko
Stuttgart na Ringsheim Ụgbọ oloko
Basel ka Ringsheim Ụgbọ oloko
Offenburg ka Ringsheim Ụgbọ oloko
The fairytale Capital nke Europe - Efteling ogige ntụrụndụ
Ọtụtụ ndị si gafee Europe na-amaghị banyere nke a dreamland niile fairytale hụrụ! Otú ọ dị, ogige bụ nnukwu onye na niile atọ mba nke Benelux. Ihe bụ ihe ọzọ, efteling bụ ebe niile maara nke ọma na akụkọ ifo-adị ndụ! Ọtụtụ nke classic fairytales nke Hans Christian Andersen, Charles Perrault, na Brothers Grimm-adị ndụ ebe a. Ha na-agba site na a dum agwaogwa nke agafe, ahụmahụ, na ndị ọzọ. Na mkpokọta, ị ga-mkpa ọ dịkarịa ala ụbọchị abụọ ileta ihe niile!
Ị nwere ike ịga Efteling pụtara mfe via ụgbọ okporo. Ọ na-emi odude nri n'etiti niile isi obodo na Netherlands. Na-eme ka ogige inweta nile nke Netherlands na karịrị. Na na nri njikọ ụgbọ oloko, i nwere ike iru ogige si n'ebe ọ bụla Europe. Nke ahụ bụ ihe ọzọ mere Efteling bụ n'etiti ndị kasị mma ntụrụndụ ogige ntụrụndụ na Europe!
Na mkpokọta, atọ ndị a bụ ndị anyị na n'elu họpụta mmadụ. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ na Europe, na nke ahụ bụ ụfọdụ, ma anyị na-eche na naanị ihe atọ ndị a bụ, n'ezie, nke kacha mma. Ị nwere ike kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ogige ntụrụndụ na ụgbọ okporo ígwè agafe ka ha. Ọzọkwa, na-eche free iji lee anya na anyị blog. Anyị na-na-na-ede banyere ọtụtụ ebe na ụgbọ okporo ígwè agafe uru ịga na-ewere ihe niile gafee Europe!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Ogige ntụrụndụ #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ Travel